Dhizaini yakaipa yeIOS 11 inosimudza bhero realamisi pakati peanonyanya kuchengetedza | IPhone nhau
iOS yakasvika nezuro kuma19: 00 dzemasikati neruzha rukuru uye nzungu diki. Hatisi kuzoramba kuti neshanduro iyi yeIOS iyo Cupertino kambani yakazokwanisa kutipa zvikumbiro zvakawanda, chekutanga chichiita kugadzirisa kupera (mukati memiganhu yakatarwa neApple) iyo Control Center. Asi handiyo chete shanduko iOS 11 yakanyanya kuwanda, uye avo vanoziva zvakanyanya uye vane ruzivo vangangodaro vanyadziswe nekuda kwenzira iyo Apple yaita nayo zvinhu.
Zvinotaridza kuti zvinhu zvachinja zvakanyanya kubva kuna Steve Jobs, anoda zvakakwana pane zvisina musoro, akaraira ngarava yepirate kubva kuCupertino. Ngatitarisei iwo iwo maficha ayo akafunga kana vachitaura zvakaipa nezve iOS 11.
Hatisi kuzoramba kuti Tim Cook naJony Ive vakaedza kuenderera nenhaka yaSteve Jobs nepavanogona napo, zvekuti taigona kuvapomera mhosva yekusafamba. Isu tinotanga nezvakataurwa naRyan Lau pane yake blog:
iOS 11 inopa manzwiro ekuti haasati apera, manzwiro anotanga kubva pamushandisi interface uye mifananidzo. Zvinhu zvinosanganiswa mumushandisi interface ine zvakawanda zvakasiyana. Kusapindirana kwezvinhu izvi kwasvika neyekuvandudza kune iOS 11.
Ichokwadi, pane zvinhu zvinoita kunge zvisingawirirane nehurongwa hwese, uye chimwe chezvinhu izvi mabhatani akapotsa akaenzana muDirector Center, akaiswa pamasikisi akasiyana kwechikonzero chisingaite chikonzero, kunyanya mushure mekuyedza kwekuita madanho mushanduro dzakapfuura dzeIOS. Iko shanduko kubva kuzere denderedzwa kuenda kune ino nyowani chimiro haina kuitwa zvizere musystem, uye izvi zvinogona kukonzeresa nyonganiso. Mumufananidzo wemusoro tinogona kuona yekutanga yekuenderana kwakashata nekuda kweshanduro mu Mazita yeakazvarwa mashandisirwo, chimwe chinhu chavanofanirwa kunge vakaona mune imwe yadzo gumi neimwe Beta shanduro.
Kana iwe uchifarira kuziva kuti mangani mamwe magadzirirwo ekukanganisa iOS 11 chiteshi, tinokurudzira kuti iwe uende IZVI ZVINONZI kwauchazoenda kubhulogi remugadziri Ryan, kunyangwe isu tichizopfupisa zvinonyanya kukosha izvo zvatakawana:
Kusiyanisa kwakasiyana pakati pekutsvaga mabara ezvishandiso zvakasiyana
Shanduko dzemafonti muzvikamu zvakafanana zveMusic uye neApp Store
Shanduko yekumashure muMumhanzi pakusarudza rwiyo, kwete muApp Store kana uchisarudza chinongedzo
Zvinetso neyakajairwa bha pane mashure akareruka kana kusviba zvakanyanya, haaenderane neyakajairika app
Kubatanidzwa kwakashata kweiyo Blur mhedzisiro mukuchinja
Dambudziko rekupa zvirimo mumavara izvo zvashata
Icho Apple ichiregeredza iyo ruzivo?
Hatisi kuzoramba kuti kambani yeCupertino iri kuramba zvishoma nezvishoma zvimisikidzo izvo zvaitonhora kufambira mberi kwayo, zvisinei, iko kufefeterwa uko kwaishandiswa sisitimu yekushandira zvakapfuura kugonesa kuri nyore nenzira yekodhi kuri kutambura nazvo. Apple yaive kuwirirana kwakaringana pakati pemushandisi interface uye software, zvisinei, zvinoita sekunge uyu mutemo wekutanga wakatemerwa naSteve Jobs zvino wave wechipiri. Zvinenge zvisina kurongeka kutaura kuti iyo system haina kugadzirwa zvakanaka mumaziso enyanzvi, asi chokwadi ndechekuti iwo madhiri ekuti Steve akanaka angadai asina kuenda asina kucherechedzwa. Uye chokwadi ndechekuti kutarisisa kune zvakadzama ndicho chinhu chinosiyanisa cheiyi kambani mumakore gumi apfuura.
Zvichakadaro, hatina sarudzo kunze kwekuombera maoko nyanzvi dzakadai saRyan dzinoburitsa pachena kuti kune zvakawanda zvakaitika (uye zvichaitika) sekunge vasiri, asi murwi wekare weIOS anoziva kubva pakubata kwekutanga neIOS 11 kuti iri kushayikwa imwe consonance mune zvimwe zvikamu, uye Apple haina kuita kuvandudza iwo ... tichazviona mune ramangwana kugadzirisa? Ino ndiyo nguva yekungonakidzwa neIOS 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Dhizaini yakaipa yeIOS 11 inosimudza bhero remaaramu pakati pevanonyanya kuchengetedza
Hatisi kuzoramba kuti chinyorwa ichi chakanaka uye kuti chakakosha pamusoro pezvese kune akanyanya muhondo mukushandiswa kweOS yeapuro nharembozha. Asi kana isu hatisi kuzoramba kuti paive nevazhinji "isu hatisi kuzoramba" muchinyorwa. Kwazisai, ndatenda nekugara uchitizivisa 🙂
Pindura kuna Realzeus
Kune zvipembenene zvakawanda… zvakawandisa kuti ive yekupedzisira vhezheni. Ndakagara ndichizvitaura, kubva paMabasa akatisiya, kwave nekuderera mu iPhone gore rimwe nerimwe gore isu vateveri veIOS tanga tichitambura ... zvishoma zvigadzirwa zvakaitwa uye kutarisirwa kushoma kunopihwa kune ruzivo ... Apple iri kurasikirwa "kukosha kwayo". Ichokwadi kuti iOS 11 inounza zvimwe zvigadziriso, asi zvakare iri kutambudzwa neZVISINGAKANGANWIKI zvikanganiso kukambani hombe yepasirese parunhare mbozha uye nedzimwe nzvimbo ...
Kana ini ndisingakwanise kuwana multitasking nekudzvanya kuruboshwe margin, ini handizoshandisa IOS 11 uye ndinonamira neyazvino vhezheni. Zvikasadaro ini ndinopedzisira ndavhiringidza neyakaomarara bhatani repamba. Sezvo zvatoitika kune vazhinji vashandisi vema6s.
Esteban Gonzalez akadaro
Ndine iyo 10.5-inch iPad uye sezvo iri yekupedzisira kubuda, ndakafunga kuti nyowani yekushandisa system yaizoshanda zvishamiso. Asi chokwadi chakasiyana, ini ndinonzwa kuti shanduko yave kuuraya kubvira pandakagadzirisa michina. Ini ndinonzwa sekunge zvakandiomera kutobaya minwe yangu kumusoro kuti ndivhure hwindo rakawanda, iyo keyboard dzimwe nguva inononoka mune mamwe mafomu, meseji yekushandisa dzimwe nguva inowana empt kusakara kana kure-pakati¨ Ndakaedza kuita kudzoreredza kuzere kubva kuTunes asi iyo haina kugadzirisa matambudziko.
Nei uchitaura nezve intuitive system ... iyo ine IOS 11 kwandiri yakamira kuve yakadaro. Mazuva mashoma apfuura uye ndinoramba ndichirwa kuti ndiise hwindo remutumwa paYouTube kana kuifambisa zvakanaka kana ndichida kunyora.
Zvisinei ... ndinofunga zvigamba zvakati wandei zvaidiwa kugadzirisa makomba ese akasiiwa asina kugadziridzwa muchirongwa paakaburitswa.
Pindura Esteban González